मार्केटिंगका लागि केस स्टडी: के हामी इमानदार हुन सक्छौं? | Martech Zone
मार्केटिंगका लागि केस स्टडी: के हामी इमानदार हुन सक्छौं?
मङ्गलबार, डिसेम्बर 3, 2019 मङ्गलबार, डिसेम्बर 3, 2019 Douglas Karr
सास उद्योगमा यति लामो समय सम्म काम गर्दै, मैले केस स्टडीहरू डाउनलोड गरेको र पढ्ने बित्तिकै म मुस्कुराउँदैछु। मलाई गलत नबनाउनुहोस्, मैले वास्तवमै धेरै कम्पनीहरूमा काम गरें जहाँ हामीले एउटा ग्राहक भेट्टायौं जुन हाम्रो प्लेटफर्मको साथ अचम्मका चीजहरू गरिरहेका थिए वा जसले अविश्वसनीय नतीजाहरू प्राप्त गरेका छन्… र हामीले उनीहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानलाई बढावा दिएका छौं।
मार्केटिंग सबै अधिग्रहणको बारेमा छैन, यद्यपि। मार्केटिंग महान संभावनाहरू पहिचान गर्ने बारेमा हो, उनीहरूलाई खरीदको लागि आवश्यक अनुसन्धान प्रदान गर्ने, र मार्केटिंग लगानीमा तपाईंको फिर्ती अधिकतम गर्ने महान् ग्राहकहरू राख्ने।
फ्ल्याक क्लाइन्टबाट पागल अपेक्षाहरू सेट गर्नु राम्रो मार्केटिंग होइन, यो समान हो गलत विज्ञापन - जबसम्म यो रचनात्मक र इमान्दारीसाथ लेखिएको हुँदैन।
महान केस स्टडी लेख्नका लागि सुझावहरू
म केस स्टडीलाई टाढा राख्न भनिरहेको छैन ग्राहकहरूको जो राम्रो परिणामहरू पाए। मलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै एक राम्रो रणनीति हो तपाइँका ग्राहकहरूको कथाहरू साझा गर्न जो तपाइँको उत्पादनहरू वा सेवाहरू द्वारा मुनाफा भएका वा राम्रो सेवा प्रदान गरिएको छ। तर केस स्ट्याडी लेख्दा तपाईले आफ्नो अर्को ग्राहकसँग अपेक्षा राख्ने कुरामा सावधान हुनुपर्दछ… वा ग्राहक जसले उनीहरूको आन्तरिक टीमको खरीद निर्णयलाई नियन्त्रण गर्न केस स्टडी प्रयोग गर्दछ। यहाँ केहि सुझावहरू छन्:
पृष्ठभूमि - ग्राहकमा केहि पृष्ठभूमि प्रदान गर्नुहोस् र उनीहरू के प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै थिए।
मानवीय संसाधन - आन्तरिक र बाह्य प्रतिभा संसाधनहरूसँग कुरा गर्नुहोस् जुन ग्राहकले लागू गरेको हो जसले आश्चर्यजनक परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
बजेट संसाधन - पहलमा लागू गरिएको आन्तरिक बजेटमा बोल्नुहोस्।
समय - मौसम र समयरेखा अक्सर एक पहल परिणाम कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् मा एक भूमिका खेल्छन्। तपाइँको केस स्टडीमा त्यसलाई साझा गर्न नबिर्सनुहोस्।
औसत - औसत परिणामहरूमा अपेक्षाहरू सेट गर्नुहोस् जुन ग्राहकहरूले प्रतिभा, बजेट, र यस ग्राहकले प्रयोग गरेको समयसीमा बिना प्राप्त गर्नेछन्।
बुलेटहरू र कल-आउटहरू - निश्चित गर्न निश्चित गर्नुहोस् सबै तत्वहरू जसले उत्कृष्ट नतीजाहरूको लागि नेतृत्व गर्‍यो।
एक ग्राहकलाई लगानीमा 638 XNUMX% रिटर्न प्राप्त गरेको कुरा साझा गर्नका लागि ठूलो केस स्टडी हो ... तर उनीहरूले कसरी यसलाई तपाइँको उत्पादन र सेवाहरू पछाडि हासिल गरे भनेर अपेक्षाहरू सेट गर्न अझ महत्त्वपूर्ण छ!
सेटिङ आशा बजार बढाउनको लागि एक महत्वपूर्ण रणनीति हो अवधारण र जीवनभर मूल्य हरेक ग्राहक को। यदि तपाईं हास्यास्पद अपेक्षाहरू सेट गर्दै हुनुहुन्छ कि औसत ग्राहकले प्राप्त गर्न सक्दैन, तपाईंसँग केही क्रोधित ग्राहकहरू हुन जाँदैछन्। र ठीक यो हो, मेरो विचारमा।
मिथ्या, गलत धारणा, र भाडा
मलाई आशा छ तपाईंले आनन्द लिनुभयो मिथ्या, गलत धारणा, र भाडा श्रृंखला जुन हामीले काम गरिरहेका छौं! उनीहरूले हाम्रो सामाजिक च्यानलहरूमा ठूलो ध्यान लिएका छन् र मलाई एब्लोग सिनेमामा हाम्रा उत्पादन साझेदारहरूले श्रृंखलामा राख्नु भएको प्रयासको मलाई मन पर्छ।
यहाँ ट्रान्सक्रिप्शन छ:
AJ Ablog: [00:00] डग, यसलाई जाँच गर्नुहोस्। त्यसैले मैले यस केस स्टडीलाई देखेँ, र मैले यी जादुको गेडाहरू किनें।
Douglas Karr: [00:06] जादुई सिमी?
एजे एब्लोग: [00:06] यी जादू कफी बीन्स, हो। तिनीहरूले क्यान्सरको उपचार गर्न पर्ने छ
Douglas Karr: [00:10] तपाईंसँग कफीको सिमी छ जुन क्यान्सरको उपचार गर्दछ?
एजे एब्लोग: [00:12] मसँग कफि सिम छ, हो। हेर्नुहोस्? केवल यसलाई पढ्नुहोस्, यसलाई पढ्नुहोस्।
Douglas Karr: [00:16] पवित्र धुम्रपान। क्यान्सर निको पार्छ। पुरुष ढाँचा गंजेपन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कब्ज स्टेज डर
AJ Ablog: [00:23] यसले गणनालाई [Choculitis [00:00:24] पनि हल गर्दछ।
Douglas Karr: [००:२५] अर्कानोफोबिया?
AJ Ablog: [00:27] होइन, यो चलचित्र हो। यो फिल्म द्वारा प्रायोजित हो।
Douglas Karr: [00:30] ढिलो इन्टरनेट गति? मलाई आश्चर्य छ कि कसले त्यो केस स्टडी लेख्यो।
एजे एब्लोग: [00 34]] मलाई थाहा छैन, मैले यो देखेको थिएँ, मैले पढें, र यो स्पष्ट छ।
Douglas Karr: [00:37] यसले कसरी काम गरिरहेको छ?
AJ Ablog: [00:39] मैले यसलाई अहिलेसम्म चलाएको छैन।
Douglas Karr: [00:41] हामी केहि कफी बनाउन जाऔं।
AJ Ablog: [00:43] ठीक छ, यो गरौं।
AJ Ablog: [00:51] मिथ्या-
Douglas Karr: [00:52] गलत धारणा-
एजे एब्लोग: [०:00:53ants] र भाँडा, शो जहाँ डग र म इन्टरनेटमा कुरा गर्न चाहन्छौं जुन हामीलाई वास्तवमा बग गर्दछ।
Douglas Karr: [00:59] हो, र आजको शो कम्पनीहरूले केस स्टडीको साथ गर्ने वाचा, वाचाको बारेमा हो।
AJ Ablog: [01:05] जस्तो तपाईको बुवाले गरेका थिए र कहिले पनि पूरा गरेन।
Douglas Karr: [01:10] त्यो अन्धकार हो। तर तपाई यो हरेक दिन देख्नुहुन्छ, विशेष गरी म धेरै सफ्टवेयरमा छु, त्यसैले म सफ्टवेयर कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्दछु। र तिनीहरूले एक ग्राहकलाई लिए, उनीहरूले एउटा विवादास्पद, अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त गरे उनीहरूको सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर, र उनीहरू भन्छन्, "हे भगवान, हामीले त्यो एक केस स्टडीमा लेख्नु पर्छ।" त्यसोभए तपाईं यस केस स्टडी पाउनुहुन्छ, र यो यो सफ्टवेयरले लगानीमा उनीहरूको फिर्ती 638 XNUMX% वा जे भए पनि बढायो। र कुरा के हो भने, के तिनीहरूसँग हजारौं ग्राहकहरू हुन सक्छन्, र एक ग्राहकले त्यो नतिजा प्राप्त गरे। हामी यसलाई अरू कतै अनुमति दिदैनौं। हामी फार्मास्यूटिकल कम्पनीलाई अनुमति दिदैनौं कि त्यहाँ क्यान्सर बिरामी छ र एस्पिरिन लिइएको एक पटक तिनीहरूको क्यान्सर गयो र भन्यो, "एरे, यो एस्पिरिनले क्यान्सर निको पार्छ।" हामी कहिले पनि यसलाई अनुमति दिदैनौं, तर केस स्टडीको कारणले हामी यसलाई हरबखत अनुमति दिन्छौं। र समस्या यो हो कि त्यहाँ व्यवसायहरू र उपभोक्ताहरू छन् जसले त्यहाँ बाहिर जान्छन् र केस स्टडी पढ्छन्, र ती-
AJ Ablog: [02:15] तिनीहरू वास्तवमै थाहा छैन।
Douglas Karr: [२:१:02] हो, तिनीहरू यो सत्य हो जस्तो लाग्छ, जस्तै कम्पनीलाई झुठो बोलिने छैन।
वक्ता: [०:२१] यदि तपाईं यो विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो झूट होइन।
Douglas Karr: [२:२]] र कम्पनीले झुठो कुरा गरिरहेको छैन।
एजे एब्लोग: [०२:२:02] तर उनीहरूले तपाईंलाई सम्पूर्ण सत्य बताइरहेका छैनन्।
Douglas Karr: [२ :02: २]] सहि। तिनीहरू केवल प्रकारको भैरहेका छन् बिल्कुल यो उत्तम उत्तम केस परिदृश्य प्रयोग गरेर। हुनसक्छ यो एउटा मार्केटिंग प्लेटफर्म वा अरू केहि थियो र उनीहरूसँग राम्रो मार्केटि team टोली रहेको थियो, र यो त्यस्तो मौसम हो जहाँ उनीहरूले धेरै बढी व्यवसाय पाए, र उनीहरूका प्रतिस्पर्धी केवल व्यवसायबाट बाहिरिए, र तिनीहरूको मूल्य निर्धारण केवल खस्कियो। र यसैले यी सबै चीजहरूले आफ्ना परिणामहरूलाई 29 638% ले वृद्धि गर्‍यो।
AJ Ablog: [२ [::02२] ठीक छ, वा यो भिडियो कम्पनी जस्तै छ, "हे हेर, यस अभियानले कत्ति राम्रो गर्यो" हेर्नुहोस्, त्यो ब्रान्डमा पहिले नै एक उत्तम निम्न छ भन्ने तथ्य बाहेक। उनीहरूले के गरे सामाजिकमा। यो भिडियो आफै होइन, तर योसँग सम्बन्धित सबै अन्य चीजहरू थिए, र त्यसपछि तिनीहरूले क्रेडिट लिदै यसो भने, "एहो, मेरो भिडियोले तपाईंको लागि के गर्‍यो हेर्नुहोस्।"
Douglas Karr: [03:12] सहि। त्यसोभए म केवल भन्नेछु कि एक कम्पनीको रूपमा तपाईले समस्याको समस्यालाई बुझ्नुहुन्छ कि तपाईले ग्राहकको साथ ती ठूला अपेक्षाहरू सेट गर्नुहुन्छ, त्यो कि त्यो क्लाइन्ट अध्ययन पढे पछि जहाज भित्र आउँदछ र प्रदर्शनको त्यो प्रकारको आशा गर्दछ।
AJ Ablog: [०:03::31१] उही परिणाम, हो।
Douglas Karr: [०:03:32२] र त्यसैले यी कम्पनीहरूले धेरै समय त्यहाँ केस केस स्ट्याक बाहिर फ्याँक्छन्, तिनीहरू वास्तवमै यसको गर्व गर्छन्, तिनीहरूले यसको व्यवसाय बन्द गर्न थाल्छन्, र त्यसपछि तिनीहरू निराश ग्राहकहरू हुन्। र मेरो कुरा यो हो, यदि तपाईं केस स्टडी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, म यसो गर्दिन कि कसैको अपवाद भएको परिणामको प्रयोग नगर्नुहोस्।
एजे एब्लोग: [०:03:47] ठीक छ, र त्यहाँ धेरै राम्रो केस स्टडीहरू छन्।
Douglas Karr: [03:49] हो, तर केस स्टडीमा इमानदार हुनुहोस्। “हे, यो हामीले पाएको प्रतिक्रियाको सामान्य प्रकारको होइन। यी विशिष्ट प्रकारका परिणामहरू छैनन्। यहाँ तीन कारकहरू छन् जुन हाम्रो प्लेटफर्मबाट वा सफ्टवेयरबाट टाढा बढ्नको निम्ति अग्रसर छन्। "
AJ Ablog: [04:04] सहि। इमानदार हुनुहोस् र अपेक्षाहरू सेट गर्नुहोस्।
Douglas Karr: [04:06] हो, इमानदार हुनुहोस्। मलाई लाग्छ कि केस स्टडी भनेको तपाईको अर्को ग्राहक वा तपाईको अर्को सम्भावितलाई के सम्भव छ भन्ने बारे शिक्षा दिनको लागि एक अविश्वसनीय अवसर हो, तर के आदर्श होईन।
एजे एब्लोग: [०:04:२०] ठिक छ, तपाईं ती :20:०० बिहान बिक्री विज्ञापनहरू मध्ये एक हुनुहुन्न, "यो तपाइँलाई प्रत्येक पटक हुने छ किनभने यो हामी के गर्छौं।"
वाणिज्यिक: [० :04: २]] र यी अभ्यास कतानासको बारेमा राम्रा कुरा ... ओह, त्यसले दुख्यो। ओह। त्यसले ठूलो चोट पुर्‍यायो। त्यसको एक टुक्रा, केवल टिपले मलाई पायो, ओडेल।
Douglas Karr: [०:04::40०] उपभोक्ताहरू र कारोबारहरूको लागि जसले केस स्टडीहरू पढ्छन्, कृपया तिनीहरूलाई नुनको अन्नको साथ लैजानुहोस् वा पछाडि धकेल्नुहोस्। यदि कसैले भन्छ, "हामी यस प्रकारको 638 XNUMX% आरओआई पाउँछौं," पछाडि धकेल्नुहोस् र भन्नुहोस्, "औसत ग्राहक के हो जुन तपाईं ग्राहकहरूसँग प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ?" र त्यसपछि ती कम्पनीहरूका लागि जसले यी केस स्टडीहरू राखिरहेका छन्, राख्नुहोस् कि यो एक असाधारण परिणाम हो कि ती केटाहरूले पाए, तर हामीले तपाईंलाई यसको बारेमा भन्न पर्छ किनकि यो एकदम रचनात्मक थियो, र यहाँ अन्य सबै कारकहरू छन् जुन यसमा झूट बोल्दछन्। र अब तपाई के गरिरहनु भएको छ तपाईको अर्को ग्राहकलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईले भनिरहनु भएको छ, "हे, मलाई उनीहरूले पाउनु पर्ने परिणामहरू प्राप्त गर्न मन पराउँछन्। मलाई थाहा छ कि हामी सायद ती प्राप्त गर्न जाँदैछौं, तर हेर्नुहोस्, जब उनीहरूले यो गरे, यो, यो, र यो- "
AJ Ablog: [० [:२:05] "र हामी केहि धेरै त्यस्तै गर्न सक्दछौं -"
Douglas Karr: [०:05:२:26] "हामी त्यस्तै केही गर्न सक्छौं र हाम्रा नतिजाहरु लाई बढाउन सक्छौं," र मलाई लाग्छ कि यो ... त्यसैले तपाईको अन्तिम उबेर-महान नतीजा देखाउँदै तपाईको ग्राहक र सामानका साथ छुटेका अपेक्षाहरू सेट गर्नबाट यस बन्डवगनबाट बाहिर निस्कनुहोस्। र त्यसोभए कम्पनीहरू र खरीददारहरूको लागि शंकास्पद बन्नुहोस्। ती केस स्टडीको शंका राख्नुहोस्।
वक्ता: [० 05: 49]] म तपाईंको आँखा खोल्न सक्छु। म तिम्रो आँखा खोल्न सक्छु।
एजे एब्लोग: [०05:57] के त्यहाँ कुनै समय साथीहरू थिए जब तपाईंलाई केस स्टडी वा विज्ञापनले धोका दिए जस्तै कुनै प्रकारको अर्थमा? म तल टिप्पणीहरु मा तिनीहरूलाई सुन्न चाहान्छु। यदि तपाईंलाई यो भिडियो मनपर्‍यो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई मनपर्‍यो र सदस्यता लिनुहोस्, र हामी अर्को भिडियोमा तपाईंलाई हेर्नेछौं।
टैग: मामला अध्ययन झूटमार्केटिंग भिडियोहरूमिथकहरू